musha Europe Vatambi Vanotamba Novak Djokovic Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeTennis Genius uyo anozivikanwa kwazvo nezita rezita rezita "Djoker“. Yedu Novak Djokovic Yemwana Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwaNovak Djokovic Biography kunosanganisira nhoroondo yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira, hupenyu hwemhuri, vabereki, mukadzi (Jelena Ristic), mararamiro, hupenyu hwehupenyu, mambure akakosha uye akawanda asiri echokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti iye ndi World Class Tennis Genius. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveBovak Djokovic's Bio, iyo inofadza chaizvo. Pasina zvimwezve, ngatitangei.
Novak Djokovic Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Novak Djokovic akazvarwa pazuva re22nd raMay 1987 kuna amai vake, Dijana Djokovic (uyo akashanda pamwe nemurume wake kutsigira bhizimisi remhuri). Zvakare kuna baba vake Srdjan Djokovic.
Baba vake ndi muzvinabhizinesi, aive neresitorendi nhatu, tenesi chikoro uye bhizinesi rekushandisa zvemitambo mumakomo eSerbia kuBelgrade, yaimbova Yugoslavia uye ikozvino guta guru reSerbia. Pazasi pane vabereki vakanaka vaNovac Djokovic.
Iyo Akabatanidzwa Sei muTennis: Kukura muBelgrade, Mudiki Djokovic aingova namakore mana chete paakatanga kuziviswa kumutambo weTennis.
Akatanga nekuenda kukambi yetenisi muNovi Sad uye panguva yaakange ave nemakore matanhatu, wechidiki Tennis prodigy (akafananidzirwa pazasi) akaonekwa achitamba mutambo uyu neSerbia tenesi mutambi uye murairidzi Jelena Gencic.
Jelena Gencic, aive akafadzwa ne Djokovic zvakanakisisa kubudirira paaiva muduku akadaro achiti:
"Iyi ndiyo tarenda huru yandakaona kubvira Monica Seles"
Uye saka akatanga rwendo rwaDjokovic kuvaka basa muTennis sezvaakaita makore matanhatu anotevera ehupenyu hwake achikorobha hunyanzvi hwake hweTennis achitungamirwa naJelena Gencic.
Novak Djokovic Childhood Nhau Chokwadi - Basa Rekuvaka:
Chimwe chipingamupinyi chikuru chakaona Djokovic chiitiko chikafu muCourer Buildup chaiva kubuda kwehondo munguva yekare Yugoslavia uye zvinotevera mabhomba eBelgrade. Kubudirira kwakaitwa neChinovic ane makore gumi nemana anonzi Djokovic nemhuri yake vanopedza chikamu chakanaka chemaawa avo vanovanza muzvivako zvepasi kuti vasazobatwa nehockwaves.
Izvo mabhomba akauya nematambudziko anokonzera zvinoumba zvakaitika zvaityisa Djokovic. Kunyange zvakadaro, akavashandisa semafungiro emafambiro akaita kuti aite basa rake muchitini nechishuwo chikuru.
Kwaive kutsunga uye kuzvipira kwaDjokovic kwakaita kuti Gencic aone kukurumidza kwake uye kuona kuti kuenda kunze kwenyika kunotsvaga yakawedzera nhanho yemakwikwi yaive sarudzo yakanakisa yeramangwana rake.
Kusvika izvozvi, akaita gadziriro yekuti iye adzidzise pasi peyaimbove mutambi wechiCroatia tenesi Nikola Pilic uye munaGunyana 1999 ane makore-gumi nemaviri akatamira kuPilić tennis academy muOberschleibheim, Germany, kwaakapedza makore mana.
Akazotevera basa buildups akaona Djokovic akatanga kuita kwake kwepasi rose mu2001 pazera regumi nemana, akahwina mumakwikwi eEuropean singles nemaviri mazita uye vaivewo chikamu che'Junior Davis Cup 'timu kubva ku' Federal Republic yeYugoslavia 'muna 14 yakasvika mufainari .
Nekudaro, akaramba asingazivikanwe uye aida mamwe magamba kuti awane mukurumbira wepasirese.
Novak Djokovic Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira:
Mukurumbira wakavhenekera mwenje wawo paDjokovic muna 2007 paakakunda yake yekutanga 'Master Series' uye akasvika pasirese yepamusoro gumi zvinyorwa. Kubudirira kwake kukuru kwakauya gore iro ne 'Roger Cup' uko kwaakakunda vatambi vepasirose vepasirose vepasi rose Andy Roddick (No. 10).
Akakundawo Rafael Nadal (Kwete, 2) uye Roger Federer (Nha. 1) muine quarterfinals, semi-finals uye masikati ekupedzisira. Akanziwo mutambi wenhau weSerbia ne "Olympic Committee yeSerbia" uye akagamuchira 'Golden Badge'.
Djokovic akabva aenda kuhwina makumi mana nematatu mumitsara mu43, mutambi wega pasi rose kuti akunde zvakadaro. Gore rimwe chetero, akahwina iyo Open Australia, Wimbledon uye iyo US Open kuti ive wepasirese 2011 mutambi wepasirose. Vamwe vese, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
VERENGA Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jelena Ristic ndiani? Mudzimai waNovak Djokovic:
Djokovic akasangana nemudzimai wake wemunguva yemberi, Jelena Ristic, akadzoka kuchikoro chesekondari ndokutanga kutamba naye muna 2005 vasati vapinda muSeptember 2013.
Vaviri ava vakaita muchato wavo pa12th yaChikunguru 2014 kuChechi yeSanta Stefano muSveti Stefan, chitsuwa chidiki uye hotera nzvimbo kuMontenegro.
Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevana vaviri, Stefan (akazvarwa muna Gumiguru 2014) naTara (akazvarwa munaGunyana 2017).
Novak Djokovic Hupenyu Hwemhuri:
Pamusoro paBaba Vake: Baba vaNovak Djokovic, Srdjan Djokovic aive nyanzvi skier uye mudzidzisi weski uyo akavhura resitorendi nemabhizimusi emidziyo yemitambo mumakomo eSerbia.
Pakarepo paakaona kuti Novak aine tarenda yakakosha, akaita zvose zvaaigona kuita kuti mwanakomana wake ave iye iye nhasi.
Pamusoro paAmai Vake: Dijana akavhura resitorendi nemabhizimusi emidziyo yemitambo mumakomo eSerbia pamwechete nemurume wake Srdjan. Mipiro yake kuna Novak Djokovic basa rinocherekedza kutanga kubva paakamupa mini-racket uye yakapfava furo bhora iro murume wake anorondedzera se:
"Toyi inodikanwa kwazvo muhupenyu hwaNovak".
Nevanin'ina vake: Djokovic ane vanakomana vaviri vaduku Marko (akaberekerwa mu1991) uye Djordje (akaberekerwa mu1995), vose vari vaviri vakatevera nzira yake nekutsvaga basa retennis tennis. Mukoma waJoordje Novak mudiki kuna vose anotaura nezvekutanga kwavo kuzvininipisa nekuzarura izvi:
"Takatora mahwendefa eti tennis, kuisa zvipingamupinyi mukati metipi uye tamboita pamabvi edu. Takanga tichivhuna zvinhu zvakapoteredza imba uye Amai vakanyunyuta, asi Baba vakati, 'Usavaregedza, ndizvo zvavanoda kuita'.
Djordje tennis basa rave rakabatwa nekuda kwekukuvara. Iye ari kudzidza bhizinesi sepurogiramu yekuchengetedza. Imwe hama yepakati, Marko aivawo mutambi wemasheni uye iye zvino anoshanda semudzidzisi we tennis kuvana.
VERENGA Dominic Thiem Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Novak Djokovic Hunhu Hwechokwadi:
Djokovic ane Height of 1.88m (6 ft 2), anotamba nemaoko (ruoko rwemakumbo maviri) uye anotaura Serbia, Italian, German uye Shona. Unhu hwake hwakanaka hwakaita kuti ave nezita rainzi "Djoker" mubatanidzwa wezita rake uye izwi rekuti “joker."
Djokovic ane hunhu uye hunosekesa hunhu, iye anozivikanwa nekugara kwake kuseka kwekuteedzera-padare kutevedzera kwevamwe vatambi vake, vazhinji vacho ishamwari dzake uye vava kuve vanozivikanwa paYouTube.
Akataura zvakanyanya nezvesimba rekufungisisa uye anonzi akafungisisa kweinosvika awa rimwe pazuva kuBuddhist Buddapadipa Tembere muWimbledon.
Novak Djokovic Chitendero - Nezve ake Maitiro:
Djokovic inhengo yechechi yeSerbia Orthodox yechiKristu, uye muna April 2011, akapiwa Mutemo weSt. Sava, 1st kirasi, chiyero chakakwirira chakapiwa, "nekuda kwekuratidza rudo rwechechi nevanhu veSerbia". Anobatanidzwa muChampions for Peace club, yakagadzirwa neRugare neMitambo, sangano reMonaco-based international.
Novak Djokovic Charity Endeavors:
Djokovic akaita sai tennis nyanzvi yakagadzira chirongwa chake chakanaka, 'Novak Djokovic Foundation' kubatsira vana vasina rubatsiro veSerbia mukuwana dzidzo yakakodzera nezvimwe zvinhu zvinokosha kuti vararame hupenyu hwakanaka uye hunobudirira.
Muna 2016 akapa $ 20,000 purogiramu yekudzidzisa mwana achiri muduku yakagadzirwa ne'Melbourne City Mission 'kubatsira vana vasina rubatsiro mune dzimwe mishonga yakawanda yezvipo.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga Novak Djokovic yedu Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!